သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှာ ကွယ် လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ် ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ဖခင် ဦး တင်မောင်ဦး – Cele News TV
သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှာ ကွယ် လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ် ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ဖခင် ဦး တင်မောင်ဦး
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်အောက်စီဂျင်လိုအပ်ကြောင်းကိုအမဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပြလာ ပါတယ်။ဖေဖေကလေLevel 12နဲ့ပေးတာ
တောင်SPO 270 ပဲရှိတော့လို့အောက်စီဂျင်လေးများကူညီကြပါဦးနော်စက်ကလဲမနိုင်တော့လို့ပါဆိုပီးပြောထားပါသေးတယ်နော်
။ဒီနေ့မှာတော့ ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်ဦးတင်မောင်ဦး အသက်(၇၄) နှစ်ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။ကောင်းရာသုကတိလားပါစေအန်ကယ်ရေ….
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ မင်းသားချောပြေတီဦးကတော့အနုပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝပြီးအကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေလည်းရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါအပြင်ပြေတီဦးကမင်းသမီးချောလေးအိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ရွှေလက်တွဲထားပြီးချစ်စရာသားသားမီးမီးတွေ လည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်အောက်စီဂျင်လိုအပ်ကြောင်းကိုအမဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပြလာ ပါတယ်။ဖေဖေကလေLevel 12နဲ့ပေးတာတောင်SPO 270 ပဲရှိတော့လို့အောက်စီဂျင်လေးများကူညီကြပါဦးနော်စက်ကလဲမနိုင်တော့လို့ပါဆိုပီးပြောထားပါသေးတယ်နော်။ဒီနေ့မှာတော့ ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်ဦးတင်မောင်ဦး အသက်(၇၄) နှစ်ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။ကောင်းရာသုကတိလားပါစေအန်ကယ်ရေ….
အဖေနဲ့အမေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမှ ရက်ပိုင်းပဲရှိ သေးတဲ့ မချိန် အစ်ကိုဖြစ် သူကိုပါ ထပ်မံဆုံးရှုံး လိုက်ရပြန်တဲ့ ဗီဗာဟိန်း
နေမကောင်းဖြစ်တာ (၃)ရက်လောက် ရှိနေ ပြီး ဒီနေ့မှာနေပြန်ကောင်းလာ လို့ ဆော့နေတဲ့ သမီး လေးထရက် ရှာရဲ့ဗီဒီယိုလေ